पाँचतारे होटलका मालिक पक्राउ
काठमाडा । लागुऔैषध तस्करीमा लामो समयदेखि फरार रहेका बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलका संचालक मस्कुर अहमद लारी पक्राउ परेका छन् । उनलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय र महाराजगंज वृत्तलेले बिहीबार महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको हो ।
सिरहाको एक क्याम्पसमा विद्यार्थीद्वारा तोडफोड र तालाबन्दी
सिराहाको एक क्याम्पसमा विद्यार्थीहरुले तोडफोडका र तालबन्दी गरेका छन् । आफूहरुको मागलाई वेवास्ता गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले ब्रम्हचारी दामोदरानन्द क्याम्पसमा तोडफोड र अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको हो ।
नेपाल बैंकले पौने २ अर्बको एफपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रिमियम मूल्यमा पौने २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपीओ) जारी गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा तीन राजदूतलाई नियुक्ति
काठमाडौं । राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार तीन राजदूत नियुक्त गरेकी छन् । ऋषिराम घिमिरेलाई रुसी महासंघ, झविन्द्रप्रसाद अर्यालललाई इजिप्ट र कालीप्रसाद पोखरेललाई क्यानडाको राजदूत नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
राजपाका विद्यार्थी महासचिव सहित २०० नेताहरू माओवादीमा प्रवेश
काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को विद्यार्थी नेताहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार बिहान खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा रजपा बिद्यार्थी संगठनका महासचिव चन्द्र भुषण साहसहितका २०० जना विद्यार्थी नेताहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन ।
रामपुर कृषि क्याम्पसका विद्यार्थी आन्दोलनमा
चितवन– रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विलासी गाडी खरिद गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलमा उत्रिएका छन् ।
एमालेले आज दिउँसो ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने
काठमाडौं। सरकारका पछिल्ला निर्णयबारे एमालेले आज औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दिउँसो ४ पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रशासकीय अधिकृत लाई कुटे
चौतारा । काम सम्पन्न नभएको योजनाको भुक्तानी गर्न नमानेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि हातपात गरेका छन् । सुनकोशी गाउँपालिकाको प्रमुख श्रवणकुमार जिसीले प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद तिमिल्सिनालाई मंगलबार दिउँसो उनकै कार्यकक्षमा हातपात गरेका थिए ।
कैलालीमा नगर प्रमुखको घर परिसरमा प्रेसर कुकुर बम विस्फोट
धनगढी। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिं साउदको वडा नं ४ अत्तरिया बजारस्थित घर परिसरमा अज्ञात समूहले गएराति प्रेसर कुकुर बम विस्फोट गराएको छ । बम विस्फोटबाट घरको पर्खालमा समान्य क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वीरबहादुर बुढामगरले बताउनुभयो ।
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनलाई गोली प्रहार गर्ने सुटर श्याम गोम्बेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंगलबार बिहान गोम्बेलाई पक्राउ गरेको हो । गौचनको गत २३ असोजमा काठमाडौंमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
वडाअध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाइ लाई फेरी अर्को मुद्दा पनि आइलाग्यो
काठमाडौं । मानव बेचबिखन मुद्दा लागेको नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई फेरी अर्को मुद्दा पनि आइलागेको छ । मानव बेचबिखन मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश आदेश पाए पनि फेरी उनीविरुद्ध जीउ मास्ने बेच्ने अभियोगको अर्को मुद्दा लागेको छ ।
एमाले प्रदेश ५ को संसदीय दलको नेता शंकर पोखरेल चुनिए
काठमाडौं, एमाले नेता शंकर एमाले प्रदेश ५ को संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् । संसदीय दलको नेता चयनसँगै पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ ।
सात वटा प्रदेशमा आज प्रदेश सांसदहरुको सपथ ग्रहण हुँदै
काठमाडौँ। सात वटा प्रदेशमा आइतबार प्रदेश सांसदहरुको सपथ ग्रहण हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र सात वटै प्रदेशका सांसदहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बुधबार प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकेसँगै देशका केही जिल्लामा आन्दोलन भएको छ । यसअघि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेका धनकुटा र डोटीसहितका जिल्लाबासी आन्दोलित भएका हुन् ।
धनकुटामा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप, ३ जना घाइते
काठमाडौं । प्रदेश नं. १ को राजधानी धनकुटा बनाइनु पर्ने मागसहित आन्दोलनरत् धनकुटावासी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । झडपमा ३ जना घाइते भएका छन् ।
काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पहिलो पटक बस्दैछ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक दिउँँसो ३ बजे सम्म स्थगित
काठमाडौं । बुधबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक दिउँसो फेरि बस्ने गरी स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो ।
अखिल क्रान्तिकारीद्धारा तीनसय परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले सप्तरीमा चिसो र शीतलहर पीडित तीनसय विभिन्न परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ ।
प्रदेश पाँचको राजधानी दाङ बनाउन माग गर्दै अनिश्चितकालीन बन्द
दाङ । प्रदेश पाँचको राजधानी दाङलाई बनाउन माग गर्दै जिल्लाबासीले बुधबारदेखि अनिश्चितकालीन बन्द सुरु गरेका छन् ।
डा. केसीलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराइयो
काठमाडौं । अदालतको अपहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । उनलाई मंगलबार बिहान ९ बजेपछि अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।
काठमाडौं। गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने दुई ग्यास प्लान्ट (उद्योग)लाई नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारबाही गरेको छ । अनुगमनमा गएको विभागको टोलीले शुक्रबार काभ्रेका दुई उद्योगलाई कारबाहीस्वरुप उत्पादन बन्द गरेको हो ।
गाउँपालिका बन्द उल्लंघन गरेको भन्दै तोडफोड
गोरखा। गोरखाको भिमसेन गाउँपालिकाको केन्द्र स्थानान्तरणको बिरोधमा उत्रिएका बगुवाका स्थानीयले बन्द उल्लंघन गरेको भन्दै सवारी साधन तोडफोड गरेका छन् ।
सरकारविरुद्ध वाम विद्यार्थीको आन्दोलन जारी
काठमाडौं । सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको वाम विद्यार्थीले आज सडक बहस कार्यक्रम गर्दैछन् । दिउँसो दुई बजे नयाँबानेश्वरमा युवा नेता तथा वकिलहरुको सहभागीतामा सडक बहस गर्न लागिएको हो ।
मापदण्ड पूरा नगर्ने ग्यास उद्योग कारबाहीमा
काठमाडौं – गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने ५३ वटा ग्यास प्लान्ट (उद्योग) माथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
हान – लहानस्थित पशुपति माध्यमिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक परमेश्वर रायले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ ।